Ogaden News Agency (ONA) – Shir Abaabul oo Caasimada Sanca Lagu Qabtay
Shir Abaabul oo Caasimada Sanca Lagu Qabtay
Posted by ONA Admin	/ March 21, 2015
shir abaabulka iyo arimaha bulshada lagaga hadlayay ayaa kadhacay dalka Yemen gaar ahaan magaalada sanca taariikhdu markay ahayda 21/2015. Shirka waxaa kasoo qayb galay bulshada qaybeheeda kala duwan dhamaantood sida hooyooyinka, odayasha, culima awdiinka iyo ururka dhalinyarada ee OYSU qaybihiisa kala duwan.
Waxaa kaloo kasoo qayb galay musuuliyiin sare oo kamid ah JWXO oo khad telefoonka kaga soo qayb gashay shirkana, waxaana kamid ahaa mudane Sh. Cabdulaahi Ciraaqi oo halkaa kasoo jeediyay warbixin aad u dheer oo dibada iyo gudaba maanta halganku meesha uu marayo uu kaga waramay. Sidoo kale wuxuu ka waramay xaalada guumaysigu maanta marayo taasoo uu ku tilmaamay inay tahay mid aad u liidata. Waxaa kaloo uu ka warbixiyay halganku maanta meesha uu maray guusha in aan qarka u saaranahay loona baahan yahay in guumaysiga la’isdaba raaciyo uun ubaahanyahay guushiina dhawdahay.
Shirkan oo ahaa mid abaabulka iyo arimaha bulshada lagaga arinanayay ayaa waxaa lagaga hadlayay sidii halkanka kor loogu sii qaadi lahaa loona dardar galin lahaa abaabulka arimaha bulshada, korna loogu sii qaadi lahaa wacyi galinta bulshada iyadoo guumaysiga wakhtigiisu gabaabsiyeyna la isu daba-raacin lahaa.
Shirka ayaa wuxuu ku soo dhamaaday sidii loogu talagalay oo guul iyo farxad ah.